Iwu 10 maka Nzukọ Ndị Kwesịrị Ekwesị | Martech Zone
Fọdụ ndị folks na-akọ isi ha mgbe oge abịaghị maka nzukọ ma ọ bụ ihe kpatara m ji jụ nzukọ ha. Ha na-eche na ọ bụ nkwanye ùgwù na m nwere ike na-egosi mbubreyo… ma ọ bụ na-egosi na niile. Ihe ha anaghị amatakarị bụ na abịaghị m nzukọ n’oge. Echere m na ọ bụ nkwanye ùgwù na ha mere nzukọ ma ọ bụ kpọọ m na mbụ.
A na-akpọ nzukọ ndị bara uru mgbe ọ dị mkpa.
Ekwesighi ịhazi nzukọ ruru eru maka afọ 3 sochirinụ… ọ bụ ihe nzuzu ịkpọ nzukọ na-enweghị ebumnuche ma gbochie nrụpụta ọrụ.
Nzukọ ndị ruru eru na-achịkọta uche ziri ezi iji rụọ ọrụ dị ka otu otu iji dozie nsogbu ma ọ bụ itinye usoro.
Nzukọ ndị kwesịrị ekwesị abụghị ebe a ga-awakpo ma ọ bụ nwaa imenye ndị ọzọ ihere.
Nzukọ ndị kwesịrị ekwesị bụ ebe nkwanye ùgwù, nsonye, ​​imekọ ihe ọnụ na nkwado.
Nzukọ ndị kwesịrị ekwesị na-amalite site na ebumnuche nke ebumnuche iji mezue ma mechaa site na atụmatụ nke onye, ​​ihe na mgbe.
Nzukọ ndị kwesịrị ekwesị nwere ndị otu na-edobe isiokwu ahụ n'ụzọ na n'oge ka oge mkpokọta nke ndị otu niile wee ghara ịla n'iyi.
Nzukọ ndị kwesịrị ekwesị kwesịrị ịwepụta ebe nke ndị otu niile maara nke ọma tupu oge eruo.
Nzukọ ndị kwesịrị ekwesị abụghị ebe iji kpuchie gị (nke ahụ bụ email).
Nzukọ ndị ruru eru abụghị ebe a ga-anwa ime ka ndị na-ege ntị (nke ahụ bụ ọgbakọ).
Enwere ndị ọzọ. Dika nzuko a kwesiri… oh… na ndi nwere M & Ms.
Tags: ezigbo nzukọesi enwe nzukọnzukọiwu nke nzukọ
Adreesị Email Dị Adị Ogologo
Dee 6, 2006 na 1: 21 AM
Brandon na-agbakwụnye nnukwu ọkwa gbasara ọnụahịa nzukọ: (ọnụọgụ nke ndị bịara ya * ọnụego ọnụ * nke nzukọ = $ $ $ nnukwu ego)
Dec 6, 2006 na 3:55 PM
Akpọrọ m ọtụtụ nzukọ asị ma chọpụta, nzukọ maka ọtụtụ akụkụ, enweghị obere uru na uru ma ọ bụ uru onye nwe ya. Ga-eresị ndị njikwa niile ndepụta a
Dec 6, 2006 na 4:14 PM
M & M bụ ndị dị mma… Brownies ka mma! Enweela nzukọ banyere inwe nzukọ? LOL
Dec 6, 2006 na 6:04 PM
Nzukọ gbasara nzukọ… chefuru nke ahụ! Argh!
Jenụwarị 20, 2011 na 10:09 PM
Ikekwe ị ga-anwale http://www.agreedo.com. Ọ na-ekwu ọtụtụ n'ime isi ihe gị nke na-eme nzukọ kwesịrị ka ị si kwuo.